Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Saint Vincent na Grenadines na-eme njem » MAP International gara n'ihu iziga ndị enyemaka nke ugwu mgbawa nke La Soufrière na St. Vincent
St. Vincent si La Soufrière ugwu mgbawa mere na Eprel 9, na-amanye ndị mmadụ 20,000 ka ha pụọ, ma hapụ ọtụtụ puku ndị bi na-ehi ụra na ebe mgbaba mberede
MAP International bụ nzukọ ahụike zuru ụwa ọnụ nke ebumnuche ya bụ ịnye ndị bi na ụwa nsogbu na ọgwụ
MAP International na-akwadebe akpa 40ft jupụtara na ọgwụ, ọkọnọ, ihe nzacha mmiri, Liquid IV, disinfectant, blanket na ngwaahịa ọcha.
Mmekọrịta na ndị mmekọ na ndị nyere onyinye na-eme MAP ka ọ dị irè na mbọ enyemaka ọdachi ha
MAP International, otu nzukọ ahụike zuru ụwa ọnụ nke ebumnuche ya bụ ịnye ọgwụ na ahụike na-enye ndị mmadụ kachasị ngwangwa ụwa aka, na-aga n'ihu na mmeghachi enyemaka enyemaka ha na ọdachi iji nyere ndị o metụtara ugwu mgbawa ugwu St. Vincent nke La Soufrière mere na Eprel 9, na-amanye ndị mmadụ 20,000 iji pụọ, ma hapụ ọtụtụ puku ndị bi na-ehi ụra n'ụlọ nchebe.
MAP International buru ụzọ soro nri maka ndị dara ogbenye ka ha ziga ihe karịrị 1,000 Disaster Health Kit (DHKs) na St. Lucia dị ka enyemaka ozugbo maka ndị ọbịa St. Vincent. N’izu ndị na-esote, nzukọ a ga-aga n’ihu n’iru enyemaka ndị ọdachi dakwasịrị. E mere atụmatụ na pasent 15 nke ndị bi n’àgwàetiti ahụ ka nọ n’ụlọ nchebe nwa oge. MAP DHKs na-akwado otu onye bi n'ụlọ ndobe izu zuru oke. Ndị DHK gụnyere nhicha antiseptik, ncha, ntacha eze, ntacha eze na ihe ndị ọzọ dị mkpa.
Johnson na Johnson Family of Companies na mmekorita ya na Johnson na Johnson Foundation, ndi ha na ha di na oge buru ibu na MAP International, were obi oma nye onyinye 20 J&J Medical Mission Packs iji nyere ndi ihe ojoo aka Otu n'ime ngwugwu ndị a gụnyere ngwakọta nke ngwaahịa ndị na-azụ ahịa na ahụike, dị ka nkpuchi, ngwọta mmiri na-egbu egbu, analgesics na vitamin maka ụmụaka na ndị okenye.
MAP International na-akwadebe akpa 40ft jupụtara na ọgwụ, ọgwụ, ọgwụ nzacha, Liquid IV, okpu agha, mkpuchi nchekwa, ọgwụ disinfectant, blanket na ngwaahịa dị ọcha. Ọzọ DHKs ga-eziga na St.Vincent na ndị mmekọ MAP ​​International.
Na mgbakwunye na mmekọrịta ndị a, ndị ọrụ Edwards Lifesciences nyeere MAP International aka site na ịkekọta DHKs ka a ziga ya na World Pediatric Project, otu n'ime ndị mmekọ MAP ​​nọ na St. Vincent. World Pediatric Project kwadoro iji kwado ụmụaka na ezinụlọ nke St. Vincent na Grenadines.
Jodi Allison, onye isi oche MAP nke Global Giving, na-ekwu na mmekorita ya na ndị mmekọ na ndị nyere onyinye bụ ihe na-eme ka MAP dị irè na mbọ enyemaka ọdachi ha. “Mkpakọrịta - ma ya na nnukwu ụlọ ọrụ, ndị ọrụ na-ahụ maka ime obodo, ma ọ bụ ndị ụka dị n’obodo - bụ isi ihe ga-eme ka MAP nwee ike ịkekwuru ọtụtụ mmadụ dịka anyị na-eme. Ekpere anyị dịnyeere ndị lanarịrị ugwu mgbawa nke La Soufrière ma anyị kpebisiri ike na anyị ga-aga n'ihu na mmekorita a na ndị anyị na ha ga-ezigara ndị ọdachi dakwasịrị na St.